Mudara raTinashe Muchuri: June 2015
Masahwira anoshanyira sahwira kuti vatambidzane mazano sezvo iwo mazano ari maranganwa. Zano ndega ndiye uya wekuzosiya jira mumasesezve. Kuti hona icho hunge muri vaviri. Saka pano tatsikwa nasahwira Ali Simbi anova mudetembi pamwe nemunyori wenyaya fupi pamwe nemanovero. Inzwaiwo nhorwa yataunzirwa nasahwira wangu Simbi.
Muzukuru wenyu ndatsva
Ndatsvira mukati chaimo
Mukati kati memwoyo
Vakupei nhava yavo
Yandichadya ndave munzira
Kana ndaziya nenzara.
Ndafunga kurova masango
Handizivi kuti ndonangepi
Ndichave sweroenda mukwasha wemhepo
Afirwa hatariswe kumeso
Nekudaro ndati mundigadzirire mbuva
Kutevera kwakaenda mwana uye
Mwana aigara pakati pemwoyo wangu
Achiuchengeta mazuva ose
Ndokusiya asina kupfigira
Kupfigira mukova wemwoyo wacho
Zvino ndatsvira mukati.
Ndinoda kumutsvaka dakara ndamuona
Ndichinge ndamuona ndichamudzoseramo
Ndopfiga zvekare mwoyo wacho
Zvekuti haabudimo sezvaakaita
Nekudaro ndati mundigadzirirewo mbuva
Mbuva yerwendo ambuya.
Rudo rwaunondipa mudiwa
Harushandutswe nemamiriro ekunze
Haruna muchando kana muzhizha
Rwakafanana mwaka yese yegore.
Dai waiva chiremba
Ndaikuti murapi mukuru
Izwi rako mushonga
Zvimhingamupinyi zveupenyu ndotokanganwa.
Patinotaura mutauro werudo
Ndotoona sendave Muparadhaise
Muparadhaise nzvimbo tsvene
Nzvimbo isina zvipomerwa
Nzvimbo inopindwa navatsvene chete.
Deno rudo rwaiyerwa
Ndiwe bedzi wakasikwa naMwari
Njere dzekusika tsvarakadenga.